“The Most Powerful Lessons In Personal Transformation” ဒီ Post လေးမှာတော့ “7 Habits of Highly Effective People” ရဲ့ “Inside-Out Approach” ဆိုတာကို မျှဝေသွားပါမယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ Character ဆိုတဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ Personality ဆိုတဲ့ အပေါ်ပိုင်းဟန်ပန်တို့ရှိပါတယ်။7Habits မှာ Character ကို သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အမြစ်တွေ အနေနဲ့တင်စားထားပြီး Personality ကိုတော့ ပင်စည်အနေနှင့် တင်စားထားပါတယ်။ အမြစ်ဖြစ်တဲ့ Character က မြေကြီးအောက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် လူတွေအပေါ်ယံကြည့်ယုံနဲ့… Read More »7 Habits’ Inside-Out Approach
Self-Help စာအုပ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာထဲက ဘာလို့ Dr. Stephen R. Covey ရေးခဲ့တဲ့7Habits of Highly Effective People က နှစ်တစ်ရာအတွင်း အကောင်းဆုံးလို့အသိအမှတ်ပြုခံ ထားရတာလဲ ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကို ကိုယ်တိုင်မေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်ကိုဖတ်၊ FranklinCovey သင်တန်းတွေတက်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ အဖြေကသူ့ဟာသူပေါ်လာတယ်။ လူအများစုကတော့ ဒါတွေသိပြီးသားပါလို့ ထင်ကောင်း ထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုက်လုပ်နေလားလို မေးလိုက်ရင်တော့ ၁၀၀ မှာ ၂ ယောက် ၃ ယောက်လောက် ပဲရှိပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲက Ideas တွေ ကတော့ အသိကိုထက်… Read More »“Most Powerful Framework In Personal Transformation”
?6Behaviours of Resilient People ? ?Self-Motivated : စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှုနှင့် ပြင်းပြမှုတို့ဟာ ကိုယ့်စိတ်ထဲကလာတယ်။ သူများပြောလို့လုပ်တာမျိုး၊ လိုချင်တာမျိုးမဟုတ်။ သူများအားပေးမှုလည်း မလိုအပ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးနိုင်တယ်၊ အားပေးတယ်။ ?လိုအပ်သောအရည်အချင်း : Self-Awareness ?Learn from failures : အမှားလုပ်မိရင် စိတ်ဓါတ်မကျပဲ အမှားထဲက သင်ခန်းစာကိုအမြဲယူတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်တင်၊ စိတ်ညစ်နေတာထက်၊ အခြေအနေ ပိုပြီးကောင်း မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်တယ်။ ?လိုအပ်သောအရည်အချင်း : Positive Thinking ?Find alternative solutions : အခက်အခဲကြုံတွေ့လာရင် ဖြတ်ထိုးစဉ်းစားဉာဏ်ဖြင့် မတူသော… Read More »အရှုံးမပေးပဲ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ လူတွေမှာရှိတဲ့ အပြုအမူ ၆ခု။
မိဘတွေဟာသား/သမီးတွေကို ငယ်ငယ်လေးမှစ၍ စကားကိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောအောင် ဆိုဆုံးမကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်က ယဉ်ကျေးတာနှင့် လုံလောက်သွားပြီလား။ ယဉ်ကျေးတာနှင့် ကျေးဇူးတရားကိုသိတာနှင့်တူလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ သုတေသနတွေအရ ကျေးဇူးတရားကိုသိတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ် ဆိုတာကိုငြင်းလို့မရပါဘူး။ ပိုအရေးကြီတဲ့အချက်က စကားကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောတတ်တာနဲ့ သူများရဲ့ ကျေးဇူးကိုသိတတ်တာနဲ့က မတူဘူးဆိုတာပါပဲ။ သူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြောတာက သူများရဲ့ကျေးဇူးကို သိတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်စကားမပြောတာထက် ပိုကောင်းပေမယ့် တကယ်ကျေးဇူးသိတတ်တယ်လို့ ဆိုလို့မရပါဘူး။ ပါးစပ်ဖြားလေးမှာတင် ပြီးသွားတဲ့စကားက အဲ့လောက်တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောတတ်ဖို့ဆိုတာက အဆုံးမဖြစ်စေသင့်ပါ။ သူများရဲ့ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မိမိတို့အိမ်မှာနေတဲ့ အိမ်အကူကိုလည်း… Read More »ယဉ်ကျေးတာထက် ပိုပါစေ။
ကျောင်းသားများနှင့် ပျော်ရွှင်စွာကခုန်နေသော ကျောင်းအုပ်ဆရာ။ အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိတဲ့ Mr. Zhang Pengfei ဟာ တရုပ်ပြည်နယ်တစ်ခုက မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပါ။ သူဟာကျောင်းများတွင် မသင်မနေရဖြစ်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားအချိန်အတွက် ဒီလိုကကွက်ကို သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရ သာမန်သင်ပေးနေတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေက ပျင်းစရာကောင်းတယ်။ ကလေးတွေလည်း သဘောမကျဘူး။ ဒါကြောင့်သူ ဒီကကွက်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကတစ်ခုတည်းနှင့် အများကြီးကိုခန့်မှန်းလို့မရပေမယ့်၊ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဒီ ကျောင်းအုပ်ဆရာဟာ သူ့ကျောင်း/သူတွေ အပေါ်မှာဂရုစိုက်ခြင်း၊ အလုပ်ကိုတာဝန်ထက်ပိုလုပ်တတ်ခြင်းတို့ဟာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပါဝင်မှု ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ သူဘေးမှာမထိုင်နေပဲ ရှေ့ကနေဦးဆောင်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆရာကြီးမျိုးကို ကျောင်းသား/သူများကလည်း ချစ်ခင်ကြမည်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။… Read More »ကျောင်းသားများနှင့် ပျော်ရွှင်စွာကခုန်နေသော ကျောင်းအုပ်ဆရာ။
စာဖတ်ခြင်း၏ အကျိုး၄ခု။ (Goalcast.com မှ4Reasons to Read More Books In 2019 ကို ကိုးကားထားသည်။) စာဖတ်ခြင်းသည် အကျိုးများစွာကိုရရှိသည်။ ထိုများစွာသောအကျိုးများထဲမှ လူသိပ်မသိသေးသော အကျိုး၄ခုကို ဒီ Post တွင် ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။ (၁) စိတ်ဖိစီးမှုနည်းစေသည်။﻿ စာဖတ်ခြင်းသည် စိတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိစေနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေကြောင်းကို သုတေသနများအရ တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ အသက်ရှုနှုန်းမှန်ကန်လာခြင်း နှလုံးခုန်နှုန်းမှန်ကန်လာခြင်းတို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးလည်းပိုကောင်းလာနိုင်ဟု ဆိုလို့ရပါတယ်။ (၂) အတိတ်မေ့ရောဂါ Alzheimer’s disease ကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်း﻿ စာဖတ်ခြင်းသည် ဦးနောက်ကို အလုပ်လုပ်ပေးနေသောကြောင့် မှတ်ဉာဏ်ကိုပိုမိုကောင်းစေပြီး အတိတ်မေ့ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သည်။… Read More »စာဖတ်ခြင်း၏ လူသိနည်းသော အကျိုး ၄ ခု။
This article will give you the lessons to become more effective public-speaker and presenter. Everyone can feel in his or her guts whetheraspeech is good or bad. But, most will not be able to tell you the reasons why they feel that… Read More »Why Hal Bosher’s Speech at TEDx Yangon was awesome!
✅ Leadership အကြောင်းသိကောင်းစရာ။ ✅ ဒီ Post လေးကိုတော့ ပိုပြီး Effective ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ကို စေသနာနှင့် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Leadership အကြောင်းကို လူတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနိုင်ငံအတွက် ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Leadership နှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင်တန်းတွေလည်းအများကြီး ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ Leadership လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Leadership Model တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတော့ စာဖတ်သူများကို သိစေချင်ပါတယ်။ Model တစ်ခုခြင်းမှာလည်း သူ့အားသာချက်နှင့်သူ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် တရားထိုင်ခြင်းတောင် နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်နည်းလမ်းတွေအများကြီးကို သိထားရင်တော့ ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ Leadership… Read More »Action-Centered Leadership by John Adari
Powered by Knowledge & Behaviour Economics